अचेल हाँस्नका लागि धेरै सजिलो छ । पहिले पहिले हाँस्नका लागि कि चुट्किला पढ्नुपथ्र्यो कि टिभीमा हाँस्य कार्यक्रम नै हेर्नुपर्थ्यो । अचेल हाँस्नका लागि न त चुटकिलाका किताब खोज्न पसलमा चहार्नुपर्छ न त टेलिभिजनमा त्यस्ता हाँस्य सम्बन्धि कार्यक्रम कुरेर नै बस्नुपर्छ । अचेल हाँस्नका लागि केवल गफ सुनेपुग्छ । गफ कसको सुन्ने ? सबैलाई उत्तर सहजै आउँन सक्छ, हाँस्नका लागि वास्तवमा नेताको गफ सुनेपुग्छ । मौसम अनुसार हसाँउने अभिनय वास्तवमा हाम्रा नेताले नै गरिदिएपछि कलाकार फ्लप भइहेका हुन् कि भन्ने आभाष हुन थालेको छ । आफूहरुको काम नेताले गर्न थालेपछि कलाकारहरुको पेशा सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर नयाँ नयाँ हाँस्य कलाकार आउँदा स्रोता एवम् दर्शकलाई कुन चाँही कलाकारलाई समय दिँउ भनेर छुट्याउँन पनि निक्कै अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ ।
मकवानपुरमा पनि केही केही कलाकार जन्मिएछन् भन्ने आभाष भएको छ । तीनका चुनावी एजेण्डा सुन्दा यी पनि हाँस्य कलाकार हुन् कि भन्ने लाग्न थालेको छ । फ्रि वाइफाई, चक्रपथ, सुरुङ्मार्ग केही केही एजेण्डा नराम्रा होइनन्, पूरा गर्नै नसकिने भन्ने पनि होइन तर ती एजेण्डा वर्तमान समयमा पूरा गर्न सकिन्छन् कि सकिन्न भन्नेमा चाँही अलि गम्भीर हुनुपर्ने पो थियो कि ? पूरा गर्न नसकीने महत्वकांक्षी एजेण्डा सुनाएर अहिले वाह क्या दामी भनेर भन्नु ठिक ठान्नेलाई अहिले हाँस्य कलाकारको उपमा भन्दा अरु के दिइरहनु ? मकवानपुरका दलका केही नेता आफ्नो पार्टीले स्थानीय तहको चुनाव जितेको खण्डमा हामी यसो र उसो गर्छौ भन्दै असम्भव हुने केहीकेही सपना बाँड्दै हिड्न थालेको पाइन्छ । उनीहरुको कुरा पत्यायर हामी दिवास्वप्न देख्न थाल्ने कि कति मिठो जोक्स भनेर हाँसेर बस्नु ?
सबैको कुरा सुन्न र आफ्नो निर्णय गर्न जानेका हामी नेपालीलाई दुनियाका जोक्स सुन्न पनि मन छ । हामी सुनेरै बसौंला, धित मरुञ्जेल सुनेर हाँसौंला किनकी नेता नाम गरेका नयाँ हाँस्यकलाकारमा हँसाउनसक्ने अद्भूत क्षमता छ । चुनावका बेला अनेक मिठा मिठा चुटकिलाहरु बनाएर ल्याउँन उहाँहरुलाई कसैले सिकाइरहँनुपर्दैन । उहाँहरुले त्यति धेरै दुःख गरेर बनाउनुभएको चुनावी एजेण्डा, चुनावी घोषणापत्र नामका सिरियलहरु हेरेर हामी मन खोलेर हाँसौंला । हाँस्नु वास्तवमा स्वास्थ्यका लागि पनि निक्कै राम्रो कुरा हो । जो हाँस्यो उ बाँच्यो, उसले जोवन साँच्यो भन्ने उखान पनि खुब चलेकै छ । चुनावका मुखमा पनि किन अनेक थरी तनाव झेल्नु बरु हाँसौं आउँनुस्, दिल खोलेर ।